Tayada waa nolosha shirkad. Shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa xakameynta tayada wax soo saarka. Waxay leedahay koox shaqaale maarayn tayo leh ah, oo ku qalabaysan shaybaarro wax soo saar xirfadeed leh, qolal tijaabo ah, iyo shaybaarro. Inta lagu jiro howsha wax soo saar, waxay u hoggaansameysaa wax soo saarka caadiga ah waxayna si adag u maaweelineysaa dalka iyo warshadaha. Jaangooyooyinka iyo heerarka shirkadaha si ay awood ugu siiso alaabtu inay buuxiso shuruudaha isticmaalaha. Wax soo saarka Shirkadda Caycemay waxay ku lug leeyihiin dhammaan noocyada shaqooyinka ay soo saareen dadka ku nool waddanka oo dhan, wax soo saarka qaarna waxay aadeen dibedda iyo adduunka. Miisaankeeda waxsoosaarka, tayada, qiimaha, gaarsiinta, iyo adeega waxay ku guuleysteen amaan aad u sareeya oo ka timid macaamiisha waxayna ku raaxeysteen sumcad sare.
Wax soosaarka shirkaddu wuxuu ujeedkiisu yahay alaab heer sare ah, waxayna ku dadaalayaan inay dheefshiraan oo ay nuugaan tikniyoolajiyad shisheeye si ay u beddelaan soo dejinta ayna u kordhiyaan heerka deegaanka. Tarpaulin ololka-celinaysa gawaarida tareenka ayaa la siiyay shirkado shisheeye. Go'aannada silikoonku waxay fadhiyaan kala-badh beeraha ku jira laminators-ka qoraxda, galaaska, alwaax, kaararka gogosha, iwm.; qalabka daboolka caagga ee warshadaha kiimikada ayaa ku riyaaqay sumcad sare;
Sheet caag Silicone for laminator qoraxda, Caycemay sheet silikoon-ilmada-adkaysi sare isticmaalaa qalabka sumcad adduunka, technology patent sare iyo wax soo saarka line kulan gaar ah, wax soo saarka uu leeyahay xasilooni sare iyo isku halaynta wanaagsan, oo si xirfad leh loo isticmaalo laminators qoraxda, iwm qalabka
Badeecadani waxay soo bandhigaysaa aashitada u adkaysta, dhexdhexaad u adkaysta, heerkulka sare u adkaysta bii'ada qalabka la xoojiyay iyo qalabka qaabdhismeedka qaaska ah iyadoo lagu saleynayo asalka asalka asalka u ah guddiga silica. Halkaas, xoogga siligga, xoogga ilmada, iyo xasilloonida cabbirka ee saxanka silikoon si weyn ayaa loo hagaajiyay, nolosha adeegga badeecadana waa la dheereeyey.
Waxa kale oo ay leedahay faa iidada marka gogosha caaga loo isticmaalo xadka, aysan waxyeello u geysanaynin qaybta unugyada qorraxda. Ballaca ugu badan wuxuu gaari karaa 4000mm bilaa dabo.
Adag (Xeebta A) 60 ± 2
Jeexitaanka xoogga Mpa≥ 10.5
Awood ilmada N / mm≥ 40
Caabbinta heerkulka ℃ 200
EVA adkaysi (marka la barbar dhigo) wanaagsan
Hore: Barkinta Silicone Rubber ee Laminator Card-sameynta
Xiga: Sheet Rubber Silikoon Waayo, Warshadaha Glass